टाउकोमा झलल बत्ति बालेको कोब्रा सर्प र कुकुर भेट भएपछि.. अनौठो दृश्य..(भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeसमाचारटाउकोमा झलल बत्ति बालेको कोब्रा सर्प र कुकुर भेट भएपछि.. अनौठो दृश्य..(भिडियो सहित)
टाउकोमा झलल बत्ति बालेको कोब्रा सर्प र कुकुर भेट भएपछि.. अनौठो दृश्य..(भिडियो सहित)
November 24, 2020 admin समाचार 2843
सर्प भन्ने वित्तिकै आङ सिरिङ्ग हुनेगर्छ। त्यसमाथि कोब्रा सर्पको’ त कुरै नगरौं। कोब्रा देख्ने वि’त्तिकै मुटुले ठाउँ नै छोड्न थाल्छ।
तर, भारतको कर्नाटकस्थित चिकमंग’लुरुको होलमाकी गाउँमा अचम्मको कोब्रा जातिको सर्प देखेपछि गाउँलेको भीड लाग्यो।
चमत्कारी भन्दै त्यहाँका गाउँलेहरु को’ब्राको पूजा आराधना गर्न थाले।समाचारमा बताइ’एअनुसार शीरमा सुनौलो रङको प्रका’श देखेपछि कोब्रा हर्नेको भीड लागेको हो।
अहिले भारत’का सोसल मिडियामा उक्त सर्पको भीडीयो भाइरल भएको छ । भीडीयोमा सर्प नजिकै एउटा कुकुर भुक्दै ग’रेको छ भने सर्पको टाउकोमा चम्किलो प्रकाश आइरहेको दृश्य देखिन्छ।
समाचारका अनुसार होल’माकी गाउँका स्थानीय अविनाशको कुकुर खेतमा गएर अचानक भुक्न थाल्यो। खेतमा गा’ईवस्तु आएको भन्दै अविनाश खेततिर गए।
त्यहाँ उनले को’ब्रा जातको अनौठो सर्प देखे।उनले सर्पको नजिकै कुकुर भुक्दै गरेको दृश्य कैद गरे। लगत्तै उनले उक्त भी’डीयो सोसल मिडि’यामा सार्वजनिक गरे।
तर, सर्प विशेषज्ञका अनु’सार त्यहाँ कुनै चमत्कारी नभइ कुनै प्रजातिको सर्पको टाउकोमा प्रकाश देखिने गर्छ । खेतमा आ’एको सर्पमा पनि त्यही प्रकाश देखिएको हो। विज्ञका अनुसार गर्मीका कारण सर्प’को टाउकोमा चम्किलो प्रकाश देखिने गर्छ। भिडियो हेर्नुहोस्….
हार्दिक बधाई ! नन्दराजले खुट्टाले लेखेरै मास्टर्स डिग्री…हेर्नुहोस् सक्दो सेयर गर्नुहोस् ।
November 11, 2020 admin समाचार 5545
उनले आँफुले जन्म दिएकी १८ महिने छोरी कुन श्रीमानको सं भो गबाट जन्मिएकी हुन् थाहाै छैन सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने याे घटना । महाभारत कालमा ५ वटा पतिलाई स्विकारेको कथा तपाई हामीले हेर्दै र देख्दै
‘मलाई दागबत्ती सपनाले नै दिनेछिन्’ : बस्नेत
November 29, 2020 admin समाचार 1768
एक दिन मात्र ढिला आएको भए तिम्रो बुबालाई नगरपालिकाले गाडिदिन्थ्यो । र, तिमी जिन्दगीभर बुबाको लास खोजिरहन्थ्यौ,’ आजभन्दा १६ वर्षअघि विनयजंग बस्नेतलाई टिचिङ अस्पतालका कर्मचारीले भनेका वाक्य हुन् यी । त्यतिवेला विनयका बुबाले सडकबाटै बेवारिसे अवस्थामा दुनियाँ
November 26, 2020 admin समाचार 2203
एजेन्सी । विश्वमा कुनै यस्ता रहस्य हुन्छन् जो अचानक नजिक आउने गर्छन्। जुन चिज रहस्यमय तथा ऐलिहासिक समेत हुने गर्दछन्।यस्तै भयो अमेरिकास्थित एनटोनिया निवासमा पनि । उक्त घर नजिकै एलियनको अड्डा भेटिएको दाबी गरिएको छ।
LEX 18 agenda conversation: Job club (544631)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515081)
Hello world! (436035)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398483)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131883)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (109090)